Aconcagua: njirimara, nhazi, ihu igwe, flora na fauna | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu n’ime ugwu ndị kachasị mkpa n’ụwa bụ Aconcagua. Eji aha Cerro Aconcagua mara ya. Ọ bụ ugwu nke dị na mpaghara ọdịda anyanwụ nke Mendoza, na etiti-ọdịda anyanwụ nke Argentina. Ọ kara akara na Chile ma bụrụ ebe kachasị elu achọtara n'akụkụ ọdịda anyanwụ dum nke ụwa. N'ịbụ ndị dị otú ahụ a dị mkpa ugwu, ndị mmadụ nwere ya na nhazi ọkwa nke asaa Summits ebe ọ hụrụ, ihe atụ, na Himalaya.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara niile nke ugwu a ma ama ma kpughere ụfọdụ ihe nzuzo ya na-atọ ụtọ.
2 Usoro Aconcagua
Anyị na-ekwu maka otu ugwu ugwu dị elu dabere na enyemaka dị elu nke kachasị mkpa na mbara ụwa. Ugwu ndị a ha nwere ugwu kachasị elu nke kọntinent America dum. Ọ dị n’ókèala Argentina. N'ime usoro ugwu nke Andes, Aconcagua bụ onye nwere ugwu kachasị elu. O nwere onu ogugu abuo nke di na mpaghara ndida na mpaghara ugwu. Ugbo elu abụọ a na-eme njem njem njem dị egwu ebe ọ bụ na njiko a maara dị ka Filo de Guanaco jikọtara ha.
N’elu anyị ga-ahụ ọtụtụ glaciers dị ebe ahụ n’afọ niile. Igwe mmiri ndị a bụ ndị na-akpụzi ọdịdị ala ka o wee nwee ebube a kemgbe ọtụtụ puku afọ nke na-agbaze ma na-agbaze agbaze.
Aconcagua nwere ugwu mgbawa, ọ bụ ezie na ọ bụghị ugwu mgbawa. Ọ bụrụ otú ahụ, ọ gaghị enwe mmiri kpụkọrọ akpụkọ n'ihi okpomọkụ nke anwuru ọkụ nke ugwu ọkụ si na ya agbọpụta. Imirikiti okwute ndị dị na elu elu ahụ bụ ugwu mgbawa. Otu ihe e ji mara ya bụ na ugwu ndị na-akpụ ya dị obere. Ugwu a nwere ugwu di elu n’elu elu ya. Nke kachasị elu dị elu bụ 2500 mita, ya mere anyị nwere ike ịchọpụta ihe ndị ọzọ kachasị elu.
Anyị ga-enyocha ntakịrị usoro nke Aconcagua si wee mụtakwuo banyere ya. Mbido ya mere mgbe ọtụtụ akụkụ ụwa jikọrọ n'okpuru Mpaghara South America mgbe ha gbusịrị. Usoro ndị mere ruo mgbe ahụ orogenesis ahịhịa na-emechi emechi na-akpụzi ihe enyemaka ma na-ebute akụkụ nke ugwu ndị a.
Ndị ọkà mmụta sayensị chere na ọ malitere n'ọtụtụ ọkwa dị iche iche ebe enwere ihe omume ndị dị iche na ndị ọzọ na mpaghara ahụ gbanwere nke ọma. Oge izizi nke Aconcagua malitere na oge Jurassic. N'oge a, nkume ndị mejupụtara ntọala ihe a niile bụ sedimenti. Mgbe e mesịrị, oge ọ ghọrọ ụlọ ọrụ kọmpat dị na Mesozoic. N'oge nke a, tectonic mmegharị nke efere kpatara nke ahụ usoro Aconcagua n'èzí na-adịwanye kọmpat a na-agbanwekwa nkume ndị na-edozi ahụ.
Oge ikpeazu nke mmalite ahụ mere n'ihi nchịkọta nke ụfọdụ ihe eji egwu mmiri na ihe ndị mmiri ozuzo na-asacha Ogechi. Mmiri ozuzo a na nchịkọta ndị a mere ka mmụba dị elu karịa ugwu.
Ebe ọ bụ na o nwere ugwu dị elu, o doro anya na ọ bụ ya kachasị elu na mpaghara Ọdịda Anyanwụ entirewa dum. A nọ na-arụrịta ụka banyere ịrị elu a kemgbe mmalite narị afọ nke XNUMX. Edere ya na elu kachasị elu bụ mita 6959. Ka oge na-aga, na Jenụwarị 2001, a kọrọ na elu nke kachasị elu bụ mita 6962. A na-akọ ọnụ ọgụgụ a n'ọtụtụ ebe. Agbanyeghị, gọọmentị ndị Argentine enabatabeghị ya.
Dika enwere glaciers n’elu onu ya, ihu igwe di otutu ebe oyi. Edeela ogo nke ogo -30 n'ọkwa. Site na mita 5000 dị elu, ọnọdụ okpomọkụ bụ -20 ogo. Nye ọtụtụ ndị ugwu na ndị ugwu, ọnọdụ oyi, nnukwu snow na mgbanwe a na-atụghị anya ya na-eme mgbalị ha iru oke mbibi. Oge oyi abụghị ezigbo enyi ibi na mpaghara ndị a.
Iru mmiri dị na gburugburu ebe a dị ụkọ, enwere obere oxygen na ikuku siri ike. Ifufe ndị a na-ebute oke ifufe ebe ha mere ebili mmiri eletrik nke ndị bi ebe a na-atụ oke egwu. Oké ifufe ahụ nwere ike iburu snow na ifufe siri ike, n'ihi ya ndụ dị mgbagwoju anya. Ihe a na-ahụkarị na mpaghara a bụ na n'oge oyi, okpomọkụ anaghị agafe ogo zero.
N'ihe gbasara osisi floral, otutu umu di iche iche biri n'ime ya ebiela uzo nke ibi n'ebe di elu. Ọnọdụ ihu igwe bụ nsogbu, mana ha amụtala ibi na ha. Otutu umu ihe akuku aghaghi idi kwa oke ikuku radieshon na ikuku siri ike. Ọ dị mma ịchọta ụfọdụ ụdị dịka yareta, ọchịcha, mpi ewu, nkụ na-acha odo odo, wdg. Na ha na-emegharị ka ọnọdụ ndị a siri ike.
Ọbụna ụfọdụ ụdị cacti nwere ike ịhụ n'oge ọkọchị na mpaghara nwere ọtụtụ ahịhịa na ahịhịa.
N'aka nke ozo, umu anumanu enweela imeghari nke oma na onodu gburugburu ebe obibi. Enwere obere ahịhịa, enweghị mmiri, oke ikuku dị ala, obere oxygen na ikuku siri ike. N'ime ụdị ndị a na-emegharịkarị na ọtụtụ oge na mpaghara ndị a anyị nwere condor, onye na-ehi ụra cinderella na squat collared. Enwekwara ụfọdụ òké dịka oke Andean, guanaco na chinchillón. Site na mammals anyị nwere puma na nkịta uhie.
Ihe dị mkpa nke Aconcagua abụghị naanị n'ihi ihe ọ na-anọchite anya n'ogo nke elu elu na uru nke ahịhịa na anụmanụ. Ọ bụ sistemu jikọtara ihe na - eme ka ọ nwee ezigbo osisi na ahịhịa n'agbanyeghị ajọ ọnọdụ. Na mgbakwunye, ọ bụ ụzọ dị mkpa e si enweta ego n'ihi ọnụọgụ ndị njem na-aga ugwu ugwu.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị ga-amụtakwu banyere Aconcagua.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Aconcagua